Red Square nke Russia, ga-ahụ | Akụkọ Njem
Red Square nke Russia, ga-ahụ
Mariela Carril | | Moscow, Ihe ị ga-ahụ
Onye ọ bụla karịrị afọ iri anọ ga-echeta oge Agha Nzuzo na otu Soviet Union si gosipụta ihe ọjọọ. Obi nke echiche a chere ihu na ikeketeorie nọ na Moscow ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iche banyere ebe ka sie ike anyị nwere ike iche banyere Ogige Uhie.
Taa Red Square bụ otu n'ime ndị mbụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị saịtị mbụ ndị njem nleta gara. Ma gịnị ka ọ bụ? Kedu ihe a ga-ahụ? Kedu ihe bụ akụkọ ntolite ya? Ọ bụrụ n’ịga Russia maka asọmpi iko mba ụwa nke 2018, ị ga - agarịrịrịrị na ya wee bụrụ ebe ị nwere ọtụtụ ozi.
1 Ogige Uhie
2 Ihe ị ga-ahụ na Red Square
Dị ka obodo ndị mgbe ochie niile, Moscow enweela ebe a na-ere ahịa n'oge ahụ na nke ahụ bụ mmalite Red Square. Dị ka isi obodo, ọ bụkwa ebe mmemme, ngagharị ndị agha, mkpọsa nke ndị eze na mgbanwe. N'ezie, ya ije kwa agbanweela ọtụtụ ihe kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Ebe a kewara Kremlin, nke bụbu ụlọ eze ma taa bụ ebe obibi nke onye isi ala, site na mpaghara azụmahịa obodo, Kitai-gorod. Ọ dịla mkpa ma kemgbe mmepe nke mgbasa ozi nkwukọrịta nke oge a, ọkachasị telivishọn, o jisiri ike bụrụ Kasị kpochapụwo oyiyi nke komunizim. Ọ bụ ndị Soviet mere ya ihe nnọchianya nke usoro ha, na-ejide usoro agha na ememme mba niile n'ebe ahụ n'afọ site n'afọ.
N'ezie, ebe a bụ nnukwu ngagharị mgbe mmeri dị na Great Patriotic War na 1945, Agha Secondwa nke Abụọ. Eziokwu bụ na ndị Soviet kwaturu ụfọdụ ụlọ ochie ka tankị ha na rọketi nwee ike ịga ije, n'agbanyeghị na ọ dabara na e mechara wughachi ha. Nchapụta ya laghachiri n'ụzọ doro anya mgbe na 1990 UNESCO weputara Red Square dika ebe nleta nke uwa.
Ihe ị ga-ahụ na Red Square
Lee enwere ụlọ ndị mmadụ na ụlọ okpukpe ileta. Ha na-etinye uche na akụkọ ihe mere eme nke Russia nke mere na echeghị m na ị ga-ahapụ nke ọ bụla n'ime ha. N'etiti ụlọ okpukpe bụ Kazan Katidral o Katidral nke Nwanyị Anyị nke Kazan, Ụlọ nsọ Ọtọdọks, nwughari nke nsụgharị mbụ nke e bibiri na 1936.
Chọọchị mbụ a malitere site na narị afọ nke iri na asaa mgbe ewuru ya iji kelee Virgin maka ịghachite obodo ahụ n'aka ndị agha Polish-Lithuania. E ji osisi rụọ nke mbụ mana ka ọkụ bibiri ya ọzọ ejiri brik wuo nke ọzọ. Kwa afọ, na-echeta oge ahụ kpọmkwem, a na-eme ngagharị site na Kremlin gaa ụka.
N’agbata 1936 na 1990 ụka adịghị, e kwatuola ya, yabụ ọ bụ otu n’ime ndị izizi ewughachiri mgbe ọdịda nke ndị Kọmunist. Na 1993 ọ mepere.
El Kremlin Ọ bụ ogige ewusiri ike, nke bụbu nnukwu ụlọ eze, na-ele Osimiri Moskva, Red Square na Katidral St. Basil. Ọ gụnyere obí eze ise, ụlọ elu, mgbidi na katidral anọ. Mgbe ọdịda tsars, ọchịchị Soviet si na Petrograd kwaga Moscow na 1918. Lenin biri ebe a n'oge ya, emesia Stalin, Khruschev na ndị ọchịchị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị mee njem ahụ, ha ga-agwa gị na ndị nna ukwu Italiantali wuru ụlọ elu na mgbidi nke Kremlin na 80 narị afọ. Taa ụlọ elu kachasị elu dị mita XNUMX.
Isi nke Kremlin bụ Katidral Square, nke nwere katidral ochie atọ na ọmarịcha ọla edo mara mma. E nwere abụọ nta ụka na mgbịrịgba elu, na Bell tower nke Ivan the Grande 81 mita elu na site na narị afọ nke XNUMX. Enwekwara ụfọdụ obí eze, Ogwe aka na Arsenal nke malitere n’oge Peter the Great.
Oge ọchịchị Kọmunist enyela Mausoleum nke Lenin, dinosaur nke komunizim nke ị na-agaghị eleghara anya. Nke a zuru agbasi ozu nke onye isi Soviet kemgbe 1924. Ewezuga mmadụ ole na ole, dịka ọmụmaatụ, agha dị mgbe ahụ na ngosi. Ejiri granite mee ya mausoleum ahụ, ọ bụkwa Aleksey Shchusev mere ya. Ọtụtụ nde mmadụ agaala na saịtị a na narị afọ nke XNUMX na nleta ahụ na-aga n'ihu.
Ruo oge ụfọdụ, Stalin dị n'akụkụ ibe ya, ili abụọ ahụ, mana nke Stalin taa dị na Necropolis nke Kremlin Wall. Isi ihe bụ na Nwere ike ịga Lenin's Mausoleum na Tuesday, Wenezdee, Tọzdee, Satọdee na Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere mbụ nke abalị. Enwere ndị mmadụ na - eche mgbe niile ị ga - adị njikere ichere n’ahịrị. Ntinye bụ n'efu na ndị uwe ojii na-eche nche na ị naghị ese vidiyo ma ọ bụ foto, ma ọ bụ kwuo okwu ma ọ bụ jiri okpu. Ihe mere e ji kwuo ya bụ ka a kwanyere ya ùgwù.
Na Red Square e nwekwara a ụlọ ahịa a na-akpọ GUM. Ọ nwere ọtụtụ alaka na mba ahụ, ebe ọ si malite malite n'oge tsars, ma ụlọ Moscow bụ ihe kachasị ewu ewu. O doro anya na mmeghe nke mba ahụ na '90s gbanwere ụdị ụlọ ahịa ahụ ma taa ọ bụ ebe a na-azụ ahịa. Dị nso bụ ihe ọzọ shopping pere mpe, TsUM. GUM ọ kwesịrị ileta? Eeh.
Na mpụga facade fọrọ nke nta ka 800 mita ogologo na bụ a mara ụlọ ochie. Ọ nwere ọdịdị trapezoid na ọtụtụ ígwè na iko, karịsịa n’elu ụlọ. Ọ nwere ụzọ doro anya nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke narị afọ nke 14. Igwe na-egbu maramara nwere dayameta nke 1200 mita, dịka ọmụmaatụ, na facade ahụ enwere Finnish granite, marble na limestone, arches na walkways. Catherine the Great nyere iwu ka ọ rụọ ya nye onye na-ese ụkpụrụ Italiantali na n'oge Soviet ọ debere ụlọ ahịa XNUMX, nke doro anya na ọ bụ obodo.
Stalin gbanwere ụlọ ahụ n'ọfịs, na nkenke, ọbụnadị ebe a gosipụtara ozu nwunye Stalian n'onwe ya mgbe ọ gbusịrị igbu onwe ya dị omimi. Taa a na-ebugharị GUM. Obere nsụgharị ya, ya na otu ihe mara mma na akụkọ ihe mere eme, bụ TsUM, na nso Thelọ ihe nkiri Bolshoi.
N'aka nke ọzọ enwere State Museum nke Akụkọ Ihe Mere Eme, nke dị n'etiti Red Square na Manege Square. Enwere ụdị ihe dị iche iche na ebe ngosi nka tọrọ ntọala na 1872. O nwere ulo ngosi iri na otu na tiketi ahụ na-akwụ 400 rubles maka onye okenye. Enwere ntuziaka ọdịyo, nke isiokwu dị iche iche na ọnụahịa dị iche iche.
N’ikpeazụ, ikekwe ị ga-akwụsị n’ihu ihe akpụrụ akpụ. Kpụrụ akpụ na sculptural ensembles ndị dị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke a mba na nke a ị ga-ahụ ọkpụkpụ n'ihu Katidral Saint Basil. Ọ na-anọchi anya Prince Dmitry Pozharsky na Kuzma Minin, ndị ọrụ afọ ofufo nke ndị agha Russia chụpụrụ ndị agha Polish - Lithuanian si Moscow na 1612. E debere ya ebe ahụ maka ncheta nke afọ 200 nke ihe omume ahụ mere eme ma jiri ọla kọpa mee ya.
Mara ihe niile a ị dị njikere iguzo n'etiti Red Square ịmara ntakịrị ihe anya gị hụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Moscow » Red Square nke Russia, ga-ahụ
Enwere m obi ike ... na ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na n'oge ndị a anyị nwere ike nweta akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ ... . Ọ nweghị ihe ị ga -ahụ akụkọ ihe mere eme nke mmeri, mgbanwe, mgbanwe nke ndị mmadụ kara akara ... ma ga -aga n'ihu na -aka. Tupu m anwụọ ... Enwere m ebumnuche siri ike ịtụgharị uche n'ọrụ ndị a dị ebube na inwe ike ịbịakwute ndị ahụ ... Karịsịa onye Rọshịa !!!!